I-Extroversion kanye ne-Introversion
3.‎2 FUNDA LENDATSHANA
I-Introversion isho ukubheka eduze kakhulu.
I-Extroversion isho ukwazi ukubheka ngaphandle.
Umuntu o-extroverted umuntu okwaziyo ukubheka indawo ahlala kuyo noma asebenza kuyo. Umuntu o-introveted ukwazi ukubheka ngaphakathi kuye kuphela.
Umuntu okwaziyo ukubuka umhlaba omzungezile futhi awubone uyiqiniso futhi ukhanye impela, usesimweni se-extroversion. Ngamanye amagama, “angabuka.” Angasebenza futhi. Ubona izinto ezidingeka zisingangathiwe futhi azisingathe futhi alawule lezo zinto okufanele azisingathe futhi azilawule. Ngasikhathi sinye, angakhetha ukuma futhi abuke lezo zinto okungafanele azilawule futhi abe nentshisekelo kuzo.
Umuntu o-introverted ngumuntu oseke wadlula ekukhathaleni esikhathini esithile ngaphambili. Usezibhekele yena (ukunakwa kwakhe kukulimala okudala okusakwazi ukumenza aphatheke kabi). Lokhu kungaqhubeka kuze kube yilapho umuntu ehlale ebheka ingaphakathi hhayi ingaphandle. Ugwema ukubheka izinto eziqinile ezimzungezile njengezidonga, phansi, amadeski, izimoto, njll. Abantu nezinto eziseduze naye zibonakala zingezona ezeqiniso kuye.
Manje ke ake sithathe isihloko sangempela somsebenzi. Umsebenzi ukusetshenziswa ukunakwa kanye nesenzo kubantu noma izinto ezitholakala emkhathini.
Lapho umuntu engasakwazi ukubheka ngqo abantu noma izinto noma isikhala lapho abekwe khona, uqala ukuba nomuzwa “wokulahleka.” Kunjengokuthi uhamba okufana nenkungu noma inkungu ekhanya kakhulu. Izinto azilona iqiniso kuye futhi akakwazi ukulawula izinto ezimzungezile. Yena uba nezingozi, unenhlanhla embi, futhi izinto zimjikele kabi ngoba nje akaziphathi noma akazilawuli noma akaziboni kahle. Ikusasa lomuntu onjalo libukeka lilibi kakhulu—kubi kangangokuba kwesinye isikhathi ngeke abhekane nalo. Lomuntu kungathiwa u-introverted.
Emsebenzini, ukunaka komuntu okungaqondakali kubambelele ezintweni ezivame ikakhulu, kuye ngamamayela ambalwa kuphela kuye. Ubhekisisa kakhulu izinto ezifinyelekayo ezandleni zakhe, njengamapeni, izincwadi, ama-computer, omakhalekhukhwini, njll. Lokhu kubeka ukunaka kwakhe kude nokuba-extroverted futhi kumenze manje abheke endaweni ethile eduze kobuso bakhe. Ukunaka kwakhe kuyabambeka. Uma izinto ebesebenza nazo zifana nokulimala okuthile okudala noma ukuhlinzwa, kungenzeka ukuthi akhumbule inkumbulo embi edlule—ube esethola izinhlungu nokugula kanye nomuzwa wokukhathala noma wokuphelelwa yithemba abenakho ngaleso sikhathi sokulimala. Njengoba ukunakwa kwakhe kuhlale kubambelele kule ndawo yempilo yakhe, uvame ukuqala abheke kuphela ezingozini nasezikhathini ezimbi ake abhekana nazo, noma engasebenzi.
Masithathe umuntu osebenza njenge-accountant yenkampani. Uhlala ebheka izincwadi nama-computer nezingcezu zephepha kumabanga amade ukusuka emehlweni akhe. Ngemuva kwesikhashana, ubonah izinto kuphela ezisondele kuye futhi udinga izingilazi ukuze azibone esekude. Amehlo akhe aqonde kalula endaweni ethile eyibanga. Ngemuva kwalokho, njengoba elungisa ukunaka kwakhe lapho, uqala ukuhoxa kulelo phuzu kuze kube, ngemuva kwesikhashana, ukugxila kwakhe kungafinyeleli ngisho nakwisikrini sakhe se-computer. Kufanele athole izibuko eziqinile ukuze akwazi ukubona kahle isikrini se-computer. Umbono wakhe nokunaka kwakhe kuyefana kakhulu—kokubili sekubampofu futhi sekubabuthaka.
Umuntu osebenza ngomshini noma nge-computer noma ngezincwadi noma ngezinto ezihlala ziqhelelene naye uyawushiya umsebenzi wakhe futhi azame ukunaka, ukunaka kwakhe ngqo lapho umsebenzi wakhe bewukhona. Ngamanye amagama, ukunaka kwakhe akuwushiyi umsebenzi wakhe nhlobo. Yize egoduka, usahleli empeleni “ehhovisi.” Ukunaka kwakhe kusagxile endaweni yakhe yokusebenza. Futhi, uma indawo lapho ayesebenza khona nekhaya lakhe kufana nokulimala okuthile noma ingozi (futhi ubani ongenayo neyodwa yalokhu, okungenani?) yena uqala ukuzizwa ephelelwa amandla noma ekhathele.
Ingabe likhona ikhambi lalokhu? I-Scientologist esiqeqeshiwe kuphela engasusa bonke lobu bunzima, kepha isisebenzi sinokuthile esingakwenza.
Akunandaba noma ngabe ungumuntu ophethe imali, noma umabhalane, noma isikhulu noma umuntu osebenzisa umshini, into ongafanele uyenze ukushiya umsebenzi, ukuya ekhaya, ukuhlala phansi ulungise ukunaka kwakho entweni eyengeziwe noma ngaphansi kwebanga elifanayo ukusuka kulokho okubheka njalo emsebenzini.
Endabeni yenduna ebhekele iqembu lamadoda endaweni yokusebenzela, ngokwesibonelo, elokhu ekhuluma nabantu bekude naye futhi ebanikeza imiyalo yokwenza izinto, into engalungile ukuthi ayenze ukwenza abuyele ekhaya akhulume nonkosikazi wakhe kuleli banga elifanayo. Into elandelayo ayaziyo, uzobe ethola ama-oda kube sengathi uyilungu lendawo yakhe yokusebenzela!
Okubi kakhulu wukuthi uye ekhaya uhlale phansi ufunde iphepha, udle isidlo sakusihlwa ebese uyolala. Uma owesilisa enza umkhuba wokusebenza usuku lonke bese ehlala phansi “ukuze aphumule” nencwadi noma nephephandaba kusihlwa, kuyaqiniseka ukuthi, kungekudala, uzoqala ukuzizwa ekhathele. Futhi ke, ngemuva kwesikhashana, wayevele awele ngaphansi kwalokho futhi wayengeke azibuze ngokungathandi kwakhe ukwenza izinto ezazilula kakhulu kuye.
Ingabe kukhona okufanele kwenziwe? Yebo kukhona. Umuntu onaka kakhulu into yakhe njalo noma ebangeni elincane lamehlo akhe ngesikhathi somsebenzi kufanele alungise ukunaka kwakhe endaweni ethile ehlukile ngemuva kwamahora omsebenzi.
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana Ukusingatha Ukukhathala Emhlabeni Womsebenzi bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.